Mozilla VPN inosvika kuSpain kwe € 5 / mwedzi kana iwe uchihaya gore rese | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga kwegore, kambani inozivikanwa nekuvandudza iyo Fox Navigator yakakanda mozilla-vpn yeLinux uye macOS. Chinhu chakashata ndechekuti panguva iyoyo akatiisa pane yekumirira runyorwa, chimwe chinhu chandisingakwanise kutakura ini. Nhasi, sevhisi yakatovhurwa kuruzhinji kuSpain, saka tinogona kushandisa Virtual Virtual Network, ine vimbiso yeMozilla uye, nekuwedzera, pamutengo wemakwikwi.
Iyo sevhisi yakatanga seFirefox Yakavanzika Network uye yaive yave kuwanikwa muBeta yeWindows yeWindows gore rapfuura. Kune maVPN mazhinji akabhadharwa ayo akakosha, kunyangwe vazhinji venyu vangave muchifunga kuti iwo emahara haana kukosha. Avo vasingatibhadharise mari havana kuchengetedzeka zvakanyanya uye ivo vanobhadharisa neruzivo rwedu, asi ivo vanogona kushandiswa, semuenzaniso, kupfuura nzvimbo inovharirwa. Kana isu tichida chengetedzo nerunyararo rwepfungwa, isu tinofanirwa kupfuura nekuongorora, uye Mozilla haisi kuzotibvunza isu kupfuura vamwe.
Mozilla VPN inodhura kubva ku € 4.99 kusvika ku € 9.99 pamwedzi
Mozilla VPN inowanikwa mumatatu modhi zvinoenderana nekuti tinotora sevhisi kwenguva yakareba sei.
Mwedzi wega wega: € 9.99.
Mwedzi 6: € 6.99.
Negore: € 4.99.
Iko hakuna mutsauko pakati pesarudzo nhatu maererano nemaficha kana mabhenefiti. Chinhu chega ndechekuti kana tichigara kwenguva yakareba, zvichachipa.
Uye chii icho Mozilla VPN inotipa? Zvakanaka, sezvatinoverenga mukati yavo webhusaiti, tinogona kubatanidza kusvika kumadivhoni mashanu, kufamba nenzira yakabatana ne anopfuura mazana mana maseva anobva kunopfuura nyika makumi matatu, yakavharidzirwa pane chishandiso, hakuzove nekurambidzwa pane bandwidth uye ivo havazorekodi zvatinoita. Uye kana isu tisina kugutsikana, ivo vanopa vimbiso yekuti tine mazuva makumi matatu ekuti tidzose mari yedu.
Ini pachangu uye nekuda kwekushandisa kwangu internet, ini handisi munhu anoda Virtual Private Network, asi pasina kupokana, imwe yekutanga yandichatarisa pandinoida ichave iri Mozilla VPN, sezvo ichipihwa nekambani iyo Ndinovimba.uye mutengo wakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla VPN inosvika kuSpain kwe € 5 / mwedzi kana iwe uchihaya gore rese
Huye, nemaseva mazana mana echinhu uye asingazive kana vachipa waya wevarindi uye pamusoro payo inodhura kwazvo, ini handioni ramangwana rakawandisa. Inosvika, semazuva ese muMozilla, yakanonoka kuenda kumusika wevpn, izvo izvozvi chaizvo, zvakazara kwazvo zvakabhadharwa vpns ine mhando yepamusoro uyezve nemaseva 400-3000 ayo avanowanzove nawo, hapana chinosekesa 6000, neizvo iwe usatomboenda kukona. Kana iyi vpn ichikupa chivimbo, kwandiri hapana, ndechekuti iwe hapana chaunoziva nezve ikozvino vpns.
Pindura kuna Norman
Firefox 90 inosvika ichibvisa rutsigiro rweFTP uye kumwe kuvandudza kwekuchengetedza uye WebRender